‘जनहितका लागि अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ’ - Himalkhabar.com
समाचारआइतबार, आषाढ १२, २०७३
‘जनहितका लागि अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ’
पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा.केसी । तस्वीरः बिक्रम राई
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले अख्तियार प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने लगायतका चार बुँदे माग राखेर आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।
२६ असारसम्म आफूले राखेका माग पुरा नभए उनी आठौँ पटक अनशन बस्ने घोषणा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरेका हुन् ।
अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउने ठूलो कुरा नभएको बताउँदै उनले भने, “राजनीतिक नेतृत्वले चाहने हो भने दुई÷तिन दिनभित्र महाभियोग लगाउन सकिन्छ । मैले त दुई हप्ताको समय दिएको छु ।”
उनले पार्टीका विभिन्न नेतालाई जनताको हितका लागि लड्न भन्दै महाअभियोग लगाउन आग्रह गरेका छन् । उनले तीन वर्ष अघि पाँचौ पटकको अनशनमा रहँदा अख्तियार प्रमुखलाई पदच्युत गर्नुपर्ने माग राखेको बताए । उनले थपे, “तीन वर्ष अघिदेखि भन्दा पनि सुधार हुन सकेन । बरु अख्तियार भष्ट्राचारमा लिप्त भयो ।”
आफ्नो दायित्व पुरा नगर्ने र व्यक्तिगत इष्ट्रेस्ट राखेर काम कारवाही अघि बढाएको अख्तियार नै भ्रटाचार दुरुपयोगमा लिप्त भएको उनी बताउँछन् ।
अख्तियारले विश्व विद्यालयको काममा हस्तक्षेप गर्नु जायज नभएको बताउँदै उनले भने, “आफै जाँच लिनु हस्तक्षेपको चरम पराकाष्टा हो ।”
“राजनीतिक नेतृत्वको भ्रष्ट, अपराधिक मानसिकता र अख्तियारको चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा चिकित्सा शिक्षा विकृती मौलायो । यस पटक अदालतबाट सुधारका लागि सहयोग पाएपनि अख्तियार र राजनीतिक नेतृत्वले त्यसो गरेनन्”, डा.केसीले भने ।
निकै आक्रोसित मुद्रामा डा. केसीले भने, “जनताको स्वास्थ्य र विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकारीमा कुनै पनि हालतमा खेलवाड हुन दिइदैन ।”
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि भन्दै बिगतमा सात पटकसम्म विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका उनले यसपटक चिकित्सा शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र मेडिकल शिक्षामा अख्तियारको अनुचित हस्तक्षेप रोकिनु पर्ने मुख्य माग राखेका छन् ।
याे पनि बढ्नुहाेस्ः ‘गोविन्द केसीलाई मानसिक उपचार गर्न’ अख्तियारको आग्रह (विज्ञप्तीसहित)
गोविन्द केसीः बेथितिबिरुद्ध जेहाद